Global Aawaj | मेस्सी पिएसजी गएपछि रोनाल्डोलाई धक्का ! मेस्सी पिएसजी गएपछि रोनाल्डोलाई धक्का !
मेस्सी पिएसजी गएपछि रोनाल्डोलाई धक्का !
२७ श्रावण २०७८ 11:25 am
काठमाडौँ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार पछिल्लो समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो युभेन्टस्मा खुसी छैनन् । युभेन्टस्मा उनको सम्झौता सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी छ र नयाँ सम्झौता भएको छैन । उनी अन्यत्र क्लबमा जानेबारे सोचिरहेका थिए ।
र, अहिलेको अवस्थामा उनको महंगो तलब व्यहोर्ने सामर्थ्य पेरिस सेन्ट जर्माइनले मात्रै राख्छ । तर, लियोनल मेस्सीले अचानक बार्सिलोना छाडे । अनि, पिएसजीले उनीसँग अनुबन्ध सम्झौताका लागि हात बढायो र दुई वर्षको सम्झौता भयो । यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कल्पना थोरैलाई थियो ।
बरु, युभेन्टस्मा खुसी हुन नसकेका ३६ वर्षीय रोनाल्डो पिएसजी जान्छन् भन्ने चर्चा धेरै थियो । रियल म्याड्रिडले पिएसजीका २२ वर्षीय स्टार कालियन एमबाप्पेमा आँखा लगाइरहेको छ । तर, यो स्थानान्तरण सम्झौता सम्भव भएपनि रोनाल्डो क्लबमा आउनसक्ने अवस्था छैन । किनकी, पहिल्यै नेइमारलाई महङ्गो तलब खुवाइरहेको पिएसजीले अब मेस्सीलाई उनीभन्दा धेरै तलब दिने सम्झौता गरिसकेको छ र यो सूचीमा रोनाल्डोको नाम थप्न पक्कै पनि क्लब चाहँदैन ।
त्यहीकारण मेस्सी र रोनाल्डोले एउटै क्लबबाट खेलेको हेर्न चाहने समर्थकहरूको चाहना पूरा हुने छाँट देखिएको छैन । युभेन्टस् छाडेर जाने सोच बनाएका रोनाल्डो यस्तो परिस्थितिले केही निराश भएको हुनसक्ने समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।
लियोनार्डो बोनुक्कीले गरेको खण्डन
तर, युभेन्टस्मा रोनाल्डोसँगै खेल्ने लियोनार्डो बोनुक्कीले यो विषयले रोनाल्डोको भविष्यमा केही फरक नपार्ने बताएका छन् । ‘मलाई लाग्छ यदी मेस्सी पिएसजी नगएको भएपनि रोनाल्डो युभेन्टस्मै बस्ने थिए, बोनुक्कीले भनेका छन्, ‘हाम्रा लागि उनी एडेड भ्यालु हुन् । र, उनले हाम्रो लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विगत वर्षहरुमा झैं राम्रो खेल्नेछन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।’ इटलीलाई युरो २०२० जिताएका बोनुक्कीले यस सिजन इटालियन सिरिए जित्नु नै क्लबको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।-एजेन्सी